Peek Cnc Machining, faritra vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina - Anebons
Anebon dia natsangana tamin'ny taona 2010. Ny ekipanay dia miavaka amin'ny famolavolana, ny famokarana ary ny fivarotana ny indostrian'ny fitaovana. Ary nandalo ny fanamarinana ISO 9001: 2015 izahay.
Ny vy vy nivadika
Machining milina plastika
Fitaovana nohomboana vita amin'ny alim-by aluminium
Machining Cnc 5 Axis
Serivisy OEM Machined CNC
Fitaovana prototyping haingana an'ny Machining CNC
Raharaha Aluminium Mini Speaker an'ny aluminium
Fanarenana sy fividianana milina vaovao Anebon
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2020 dia tena nahatsapa ny tsindry fanaterana i Anebon. Na dia tsy kely intsony ny haben'ny ozinina, saingy zara raha mahafeno ny filan'ny mpanjifa izany. Raisina an-tanana ny fanomezana ny mpanjifa ...
Tsidiho ny mpanjifantsika any Alemana
Niara-niasa tamin'ny mpanjifantsika efa ho 2 taona izahay. Nilaza ny mpanjifa fa tena tsara ny vokatra sy serivisinay, ka nanasa anay hitsidika ny tranony (Munich) izahay, ary nampahafantatra anay ny fahazarana sy fomba amam-panao eo an-toerana. Amin'ny alàlan'ity dia ity dia manana antoka bebe kokoa izahay momba ny maha-zava-dehibe ny serivisy sy ...
Anebon Hardware Co., Ltd. dia nahazo ISO9001: 2015 “Rafitra fitantanana kalitao
Tamin'ny 21 novambra 2019 dia nandalo ny fanadinana henjana sy ny fankatoavana ny fangatahana i Anebon, nanolotra fitaovana, fandinihana, fanamarinana ary fanaovana dokambarotra ary fametrahana azy, ary ireo entana fanaraha-maso rehetra dia nahafeno ny fenitra voalaza ao amin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001: 2015 sy ireo ...